Nahoana no maneso sy manitsy azy io ny WiFi?
Nahoana no miparitaka ny WiFi?
saika Wifi sucks ao amin'ny tambajotra an-trano. Isika rehetra dia niaritra ny famonoana mahantra an'ny tranokala WiFi ary ny fisarahana, ny fisavorovoroana, ary ny fikarakarana ny homegrown taorian'izay noho ny tsy fahampian'ny finoanoam-poana. Raha toa ka vonona IT IT ianao, mikaroka fomba iray hampahafantarana amin'ny namanao fianakaviana sy mpiara-mitory hoe nahoana ny tsy fahombiazan'izy ireo no mihodinkodina manodidina ny fitaovana fitsaboana azy ireo dia tsy mety miasa - ary inona no hitranga?
Amin'izao fotoana tsy dia fantatrao loatra ny IT sy ny fikarohana ny fomba fitantanana matihanina amin'ny fanamafisana ny rafitra WiFi, ity lahatsoratra ity dia sehatra iray manampy amin'ny fandaminana WiFi sy ny boky fampiasana ny tranonao ho toy ny toeram-pitsaboana ho an'ireo fahaiza-manao azonao ampiasaina. isan'andro amin'ny maha-jenitika IT.
Ny WiFi amin'ny natiora tena izy dia ratsy kokoa noho ny filalaovana momba ny kalitao sy ny tanjaky ny tondro zotra. Ireo famantarana izay mandeha amin'ny fitaovana ara-batana toy ny jiro dia manana fomba azo ekena. Ny fahitalavitra tsy misy fepetra dia afaka mifamihina ary mety hamery ny tanjany lavitra kokoa avy amin'ny loharano famindrana. Ny WiFi dia azo antoka fa ny fivarotana, nefa iray ihany ny olona maro vonona ny hanao - tsy misy toerana ho an'ny fikambanana ethernet ao amin'ny ankamaroan'ny tranonay-mampiasa gadget. Noho izany dia mamono ny tanjaky ny daty iainantsika izahay noho ny bodofotsy miovaova eo amin'ny sehatra izay misidina ara-bakiteny ao amin'ny eter. Ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mameno ny lavaka ao anaty bodofotsy, ka mahatonga azy ho vaky rivotra mahery vaika amin'ny fikambanana izay mandrakotra ny tranonareo manontolo.
Ny switch dia manara-maso ny fifamoivoizana amin'ny tranokala. Azonao atao ny mizaka bebe kokoa ny fahaizan'izy ireo ary mandray anjara amin'ny traikefa voalohany nataon'i Keith amin'ny switch sy switch. Na izany na tsy izany, ireo fitaovana entin'ny ISPs dia ny 2-in-1 gadgets. Izy roa dia manara-maso ny fifamoivoizana ary mamindra ny famantarana ny onjam-peo izay mamaritra ny fifandraisana misy anao. Izany no antony mahatonga ny fametahana filaharana eo amin'ny fitaovanao ary mety ho voatsikera ianao hanondro azy ireo eo amin'ny toerana mahatsiravina ao an-tranonao, kanefa ny famantarana tsy misy filaharana dia natao hanapatapaka sy hifandraisana amin'ny sisin'ny angona 90. Noho izany, dia azo antoka fa efa voamarika amin'ny fomba mitovy izy ireo, na eny amin'ny sehatra na horita.
Raha toa ka mety hanatsara ny fari-piainana ny fitaovana fitsaboana, dia mbola tsy mahasakana ny tranonao manontolo izany. Satria ireo rojo 2-in-1 dia manatanteraka asa roa amin'ny roa avo roa heny, ary misy iray monja amin'izy ireo ihany, mahomby kokoa noho ny gadget voatokana antsoina hoe WiFi Access Points (WAP) izy ireo.
Ny fitaovan'ny combo sy ny fitaovana fampielezam-peo WiFi dia matetika miezaka ny manao tafahoatra sy ny ady mba hanomezana fahafaham-po amin'ny trano iray manontolo. Fa kosa, ny kitapo WAPs avy amin'ny mpivarotra iray mitovy amin'izany dia hifampiresaka, ary hanome betsaka kokoa ny saran-dalana ho an'ny tranonao.
Tsarovy fa ireo gadgets ireo dia mbola mamoaka famantarana izay amin'ny ankapobeny, nefa tsy mivadika. Amin'izao fotoana izao, raha tsy manana trano maromaro ianao, dia tsy mitaky WAP iray isaky ny gorodona.
Ny fitaovana maimai-poana amin'ny WiFi sy WiFi dia afaka mifandray amin'ny fahazoana ny fampiasana fitsipika mitovy amin'ny fifandraisana: ny standard 802.11, izay mamaritra ny fomba ahafahan'ny gadget mifampizara vaovao amin'ny alalan'ny fantsona samihafa.
Ao anatin'ny fenitra 802.11, dia misy fitaovana fantsona samihafa azo ampiasaina mba hifandraisana, izay rehetra tsy misy lisansa, izay midika fa tsy voafehy izy ireo ary tsy mila manelingelina amin'ny fitenenana mahazatra amin'ny fifandraisana amin'izy ireo. Izy ireo dia ampahany betsaka amin'ny fifampizaràna fohy, noho izany dia tsy misy ny fifandonana misy ifandraisany - tsy hiteny ianao amin'ny tsy fetezana tsy azo hialana amin'ny DJ maraina. Na dia izany aza dia maro be ny fandaharana dia mifanakaiky ary tena mahazatra tokoa ny fampielezana ny WiFi amin'ny trano mifanolo-bodirindrina, na amin'ny gadget ao an-tokantrano toy izany aza, mba hijery fantsona.
Azonao atao ny mifidy eo amin'ny fametrahana gadget ho 5GHz na 2.4 GHz. Ny andiam-pirazanana dia 2.4 ary ireo sehatra ao amin'io faritra io izay mifanalavitra tanteraka ka tsy mitsahatra dia 1, 6, ary 11. Ireo no fanapahan-kevitra tena mahazatra, ary raha toa ka haka azy ireo ianao dia mila miantoka ny tsy itateranao ireo mpifanolo-bodirindrina aminao.
Na izany aza, raha toa ka manana WAPs ianao na mandefa fahitalavitra tahaka izany, na dia mety ho iray amin'ireo telo voarakitra an-tsoratra aza izy ireo, dia hampihorohoro sy hampitombo ny WiFi. Mety mila mifindra any amin'ny 5GHz ianao amin'ny fahazoana ny zava-misy fa na dia misy aza ny mari-pamantarana faran'izay kely kokoa, izany dia tena tombony amin'ny antony mety hisy ny fantsona mazava ao.